भो नदेखाउ, कमल राणालाई संसदको काम कारवाही - अन्वेषी मिडिया प्रा .लि.
एकपटक राणाले द्वारिकादेवीलाई सोधेकी थिएन – म त राणाकी बुहारी । काठमाडौंमै रहेँ । सरकारबाट मनोनीत गरिबक्सियो । तपाईँ चुनाव उठ्ने वातावरण चाहिँ कसरी बन्यो हँ ? द्वारिका देवीले त्यस दिन भनेको कुरा राणाले यसरी सुनाइन् — मेरो क्षेत्र डँडेलधुरा कति दुर्गम छ भने तपाईंले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न । अरु भएको भए मलाई चुनाव उठ्न प्रोत्साहित गर्थे भनेर म कल्पना गर्न पनि सक्दिन । मलाई त विश्वेश्वर बाबुले हातैमा ल्याएर टिकट दिनुभएको चुनाव लड्नुस् भनेर । नत्र, चुनावमा उठेर म कसरी यहाँसम्म आईपुग्थेँ होला र !
दुई वर्ष हुनै लाग्यो पहिलो संसद्को उपाध्यक्ष बन्ने दक्षिण एसियाकै प्रथम महिला कमल राणालाई विशाल नगरस्थित उनको अपार्टमेन्टमा भेटेको । कुराकानीको थालनीमै उनले सुनाइन् – सानै उमेरमा बिहा भयो । पढाइ पूरा गर्न पाइन । केटाकेटी हुर्किएपछि फेरि भर्ना भएर पढ्दै थिएँ । विसं २०१६ तिरको कुरा हो । सरकारबाट (राजा महेन्द्र) महासभा सदस्यमा मनोनीत गरिबक्सियो ।
संसदको माथिल्लो सदन महासभामा राणासहित राजाबाट मनोनीत १८ र प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित १८ गरी ३६ सदस्य हुन्थे । तिनताका महिलाका लागि राजनीति सहज थिएन ।
त्यसैले त दुई सदनात्मक संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व दुईमै सीमित थियो । राणा मनोनीत भएर माथिल्लो सदनमा पुगेकी थिइन् भने प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसबाट द्वारिकादेवी ठकुरानी प्रत्यक्ष निर्वाचित ।
एकपटक राणाले द्वारिकादेवीलाई सोधेकी थिएन – म त राणाकी बुहारी । काठमाडौंमै रहेँ । सरकारबाट मनोनीत गरिबक्सियो । तपाईँ चुनाव उठ्ने वातावरण चाहिँ कसरी बन्यो हँ ?
द्वारिका देवीले त्यस दिन भनेको कुरा राणाले यसरी सुनाइन् — मेरो क्षेत्र डँडेलधुरा कति दुर्गम छ भने तपाईंले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न । अरु भएको भए मलाई चुनाव उठ्न प्रोत्साहित गर्थे भनेर म कल्पना गर्न पनि सक्दिन । मलाई त विश्वेश्वर बाबुले हातैमा ल्याएर टिकट दिनुभएको चुनाव लड्नुस् भनेर । नत्र, चुनावमा उठेर म कसरी यहाँसम्म आईपुग्थेँ होला र !
राणाले लेखकलाई सुनाइन् — संसद्मा निर्वाचित भएर आएपछि बीपीले द्वारिकालाई मन्त्री बनाउनु भयो । देशकै पहिलो महिला मन्त्रीको इतिहास कोरियो । तर, मलाई अहिले आएर लाग्छ स्वास्नी मानिस भएकाले उहाँलाई सहायक मन्त्री बनाइयो । लोग्ने मान्छे भएको भए मन्त्री भैहाल्थ्यो होला ।
तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको दुई तिहाइ बहुमत भए पनि माथिल्लो सदनमा उसले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जित्न मनोनीत सदस्यलाई मिलाउनुको विकल्प थिएन । राजाले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न आफ्ना विरोधीलाई छानीछानी महासभामा मनोनीत गरेको बीपीले समेत आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन् ।
यी सब कारण पनि कांग्रेसीहरु मनोनीतलाई पार्टी प्रवेश गराउन लागि परेका थिए । यो मिसनमा सर्वाधिक सक्रिय हुनेमध्येका एक थिए कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विश्वबन्धु थापा । उनले राणालाई भनेका थिए– हजुरले कांग्रेसको सदस्यता लिनु पर्‍यो । हामी उपाध्यक्ष बनाउछाैँ ।
राणाले २०७६ असार १५ गते लेखकलाई सुनाइन् – विश्वबन्धुको कुरा सुनेर मलाई भनक्क रिस उठ्यो । अनि भनिदिएँ । म उपाध्यक्ष पनि उठ्छु । कांग्रेसमा त जाँदै जान्न ।
त्यहीबाट विवाद सुरु भयो । उमेर विवाद निकालेर उनलाई रोक्ने प्रयास भए । राणाले लेखकलाई सुनाइन् – स्वयं प्रधानमन्त्री बीपी आएर भन्नुभयो । ए विश्वबन्धु ! छोड, यो सब । राजनीति सिद्धान्तको लडाइँ हो, उमेरमा अड्किनु हुँदैन । तर, विश्वबन्धुले मान्दै मानेनन् । बुबाका साथ जन्म स्थान पाल्पा गए उमेर प्रमाणित हुने कागज ल्याएर उमेदवार भएँ । चुनाव भयो । सत्तापक्ष कांग्रेसका उमदवार डीके शाहीलाई हराएँ । वासिङटनपास्टलगायत प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिकामा समाचार छापियो । नेपालमा सत्तापक्षका उमेदवारलाई हराएर महिला भइन् उपाध्यक्ष ।
उमेरले नौ दशक नाघेकी कमल राणाले मन्द मुस्कानका साथ सुनाइन् – मेरो दाइ हृषिकेश शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधि । न्युयोर्कबाट पत्रिकाको “कटिङ“ पठाइ दिनुभयो र समाचार हेर्न पाएँ ।
तिनताका महिलाले चुलोचौका हेर्ने हो राजनीति होइन भन्ने बुझाइ थियो । राणा परिवारकी बुहारी (मीनशम्शेर राणाकी पत्नी) भएकाले मात्र उनलाई केटाकेटी हुर्केपछि कलेज जाने छुट मिलेको थियो । तिनताका संसद्का पदाधिकारीलाई राज्यले गार्ड दिए पनि मोटर भने दिएको थिएन । गाडी हुनेलाई तेल भने दिइन्थ्यो । राणा आफ्नो निजी मोटरमा राष्ट्रिय झन्डा लगाएर आवतजावत गर्थिन् ।
राणाले सम्झिइन् – हामी मीनभवनमा बस्थ्याैँ । पानी पर्‍यो भने हिलोले घर (हालको मीनभवन क्याम्पस) पुग्नै गाह्रो हुन्थ्यो ।
सिंहदरबारस्थित ग्यालरी बैठकमा बिहान ९ देखि १२ बजेसम्म महासभा र दिउँसो प्रतिनिधि सभाको बैठक हुन्थ्यो । महासभाको काम सकिएपछि राणा नेसनल कलेज (हालको शंकरदेव) मा बेलुकाको सिफ्टमा पढ्न थालिन् ।
राणाले लेखकलाई सुनाइन् – नातामा भतिजा पर्ने ब्रह्म शम्शेर कांग्रेसका सांसद थिए । उनले एक दिन भने – मुवा झन्डावाल गाडी लिएर पढ्न गएको त अलि सुहाएन । उनले व्यंग्य गरेको चित्त बुझेन र भनिदिएँ – तिमी भएको भए भट्टी जाने थियौ । म सरस्वतीको मन्दिर गएँ । के भयो त ? संसद्मा झन्डा हल्लाएर जान्थेँ भने क्याम्पस जाँदा छोपेर । कलेजमा मेरोमात्र मोटर हुन्थ्यो ।
राणाले भनिन् – म त्यो जमानाको मान्छे । कलेजमा पनि दुई छात्रामात्र थियाैँ । म र मनमोहन अधिकारीकी श्रीमती साधना प्रधान । छोरी चेलीलाई पठाउनु हुँदैन । पढेलेखे भने चिठी लेख्न जान्ने भएर पोइल जान्छन् भन्ने जमानाको कुरा गर्दैछु म । हिजोआज त स्कुल कलेजमा केटाभन्दा केटी नै बढी छन् भन्ने सुन्दा दंग हुन्छु । राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखजस्ता उच्च पदमा महिला पुगिसके । राजनीतिक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने संविधान बन्यो । यो चानचुने उपलब्धि हैन ।
राणा उपाध्यक्ष हुँदा संसदीय अभ्यास नेपालका लागि नित्तान्त नौलो थियो । संसदीय मर्यादा र परम्पराको कुरै छोडाैँ, पढेलेखेका सांसद नै नगण्य थिए ।
छ दशकअघि अध्यक्षको आसनबाट महासभा बैठक चलाउँदाको रमाइलो अनुभव पनि उनले सुनाइन् – हाम्रो घरमा फोन थिएन । मनोनीत भए पनि कांग्रेसको समर्थनमा निर्वाचित भएका थिए अध्यक्ष डम्बरबहादुर सिंह । अहिले संसद भवन (वानेश्वर) रहेकै स्थानमा सेनाको ब्यारेक थियो । केही विवाद भयो कि अध्यक्ष ज्यू, बिरामी हुनुहुन्छ हजुर चाँडै आउनु पर्‍यो भन्ने खबर त्यही ब्यारेकमार्फत मकहाँ आइहाल्थ्यो ।
स्मरणमा आइरहने संसद्को एउटा घटनाका बारेमा राणाले भनिन् – अठार महिनामा अधिवेशन त जम्मा दुईवटा भए । तर, यसबीच धेरै घटना भए । बीपीको हँसिलो मुहार र भाषण गर्ने कला अनि सबैको आदर गर्ने बानी म भुल्न सक्दिन । अर्को एउटा घटना छ । तिनैताका मुस्ताङको सीमामा चिनियाँ पक्षले हानेको गोली लागेर नेपाली सेनाका हवल्दार बमबहादुर मरेको घटनामा संसद्मा गरमागरम बहस चलिरहेको थियो ।
यस्तैमा एक दिन सदनको कारवाही हेर्न बबर शम्शेर पनि आउनु भएको थियो । म पनि उहाँसँग बसेर प्रतिनिधि सभाको बहस सुनिरहेकी थिएँ । त्यो दिन विपक्षी दलका नेता भरतशम्शेरले निकै राम्रो सम्बोधन गरे । सरकार र प्रधानमन्त्रीको जमेर आलोचना गरे । बैठक सकिएपछि बबरशम्शेरले नातीलाई भन्नुभएको थियो – तिम्रो प्रस्तुति मलाई एकदमै मन पर्‍यो तर त्यसरी प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्न नहुने । कमसेकम प्रधानमन्त्रीको मर्यादा राखेको भए हुने ।
भरतशम्शेरका बाजे बबर, मोहनशम्शेरपछि प्रधानमन्त्री हुने रोलक्रममा हुनुहुन्थ्यो । विसं २००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भएकाले उहाँ प्रधानमन्त्री हुन पाउनु भएन । एक सय चार वर्षे राणा शासन पनि अन्त्य भयो ।
राणाले ती दिन सम्झिइन् । संसद् मजाले चलेको थियो । बीपीजस्तो नेता हामीले पाएका थियौँ । असाध्यै असल मानिस । तेरोमेरो भन्ने नभएको । तर, के गर्ने बीपी र राजा महेन्द्रको ठ्याक मिलेन । राजाले आज लिन्छन् भोलि लिन्छन् भन्ने हल्ला चल्न थालिहाल्यो ।
विसं २०१७ साल पुष १ गते राणा घरमै थिइन् । कसैले संसद् भंग भएको सूचना दियो । पहिलो सूचना दिने मानिस को थियो उनको स्मरणमा छैन ।
राणाले सुनाइन् – खबर सुनेर झसंग भएँ । बिहान उठेर सदन गएको बानी । के गरौं ? के गरौँ? जस्तो भयो । सुनसान । घरमै बसेँ । बाहिर जाने कुरा भएन । चिनेका मानिस सबै जेल परिहाले । केही दिनपछिको कुरा हो, संसद्मा रहेका आफ्ना सामान लिन भनेर सिंहदरबार छिरेँ ।
सुनसान छ । बरफबाग नजिक विपक्षी दलका नेता भरतशम्शेर अरु राजबन्दीका साथ घाम तापेर बसेका देखिए । कराए – ए मुमा मेरो गलबन्दी हजुरकोमा छुटेको छ है । म लिन आउँछु । बोलिन । बाटो लागेँ । किनभने मलाई कार्यकक्षमा रहेको आफ्नो सामान लिनु तर कसैसँग नबोल्नु भनिएको थियो । भरत शम्शेरले फेरि भने – ए मुमा हामीसँग नबोल्नु भनेको होला है । म नबोलेरै फर्किए ।
बहुदलीय संसदीय व्यवस्था गएपछि के हुने हो भन्ने अन्योल कायमै थियो ।
राजा र बीपीको व्यक्तित्व टकरावबाहेक संसद् विघटन हुनुपर्ने अर्को कारण उनले अझै पहिल्याउन सकेकी छैनन् । भन्छिन् –त्यस बेला संसदीय व्यवस्था नगएको भए राजनीतिकरुपमा देश धेरै अघि जानुपर्ने थियो । देश बन्ने थियो । जनता धेरै माथि पुग्थे । दुर्भाग्य भयो ।
छ दशकअघि संसद्को नेतृत्व गरेकी कमल राणाले देशमा बहुदलीय व्यवस्था (२०४६) स्थापना भएर चारवटा संसदीय (२०४८, २०५१, २०५६ र २०७४) र दुई वटा संविधान सभा (२०६४ र २०७०) का चुनाव भइसक्दा समेत संसद्को कामकारबाही प्रत्यक्षरुपमा हेरेकी छैनन् ।
यस सन्दर्भमा राणाले लेखकलाई सुनाइन् – अब त ऊ बेलाको जस्तो संसद् छैन । सदनको कारबाही त म अहिले पनि रुचिपूर्वक हेर्छु । तर, टेलिभिजनको पर्दामा । आधा कुर्सी खाली देख्दा मन दुख्छ । हाम्रो पालामा सधैँ भरिभराउ हुन्थ्यो । अब त संसद्मा पढेलेखेका मानिस धेरै भए । उनीहरु कसरी प्रस्तुत हुन्छन् होला ? एकपटक गएर संसद्को कारबाही हेर्ने मन छ ।
राणासँगको वार्तालाप केही सांसदलाई सुनाएर एकपटक उनलाई संसद् बैठकमा आमन्त्रण गरेको भए हुने नि भनेको थिएँ ।
तर, संसदीय प्रजातन्त्रको जग बसाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी प्रथम उपाध्यक्ष राणालाई संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापना भए यताका तीन दशकमा न संसद् सचिवालयले सम्झियो न त राजनीतिक दल र तिनका सांसदहरुले नै ।
कुनै समय संसद्लाई “खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने संस्था“ ठान्ने कम्युनिस्टहरु नै यति बेला पुनःस्थापित संसद्लाई पंगु बनाउने खेलमा लागेका छन् । यसबेला त राणालाई सदनको कारबाही देखाउन कसैले पहल नगरेकै राम्रो !